Budata Ghost Recon: Wildlands HQ APK maka Android
Budata Ghost Recon: Wildlands HQ
Budata Ghost Recon: Wildlands HQ,
Ghost Recon: Wildlands HQ pụtara dị ka akụkụ mmejuputa egwuregwu ahụ ma na-enye gị ohere ịpụ iche nazụ ahịrị ndị iro. Nime ngwa a, nke ị nwere ike iji site na smartphone ma ọ bụ mbadamba ihe nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo, ị nwere ike ịnweta ozi niile gbasara egwuregwu ahụ ebe ọ bụla njikọ ịntanetị dị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmekọrịta egwuregwu na mpụga Bolivia, enwere m ike ịsị na Ghost Recon: Wildlands HQ bụ ngwa ị na-achọ.
Ghost Recon: Egwuregwu Wildlands, nke Ubisoft mepere beta na nso nso a, enwetalarị ekele nke ọtụtụ ndị ọrụ. The Ghost Recon: Ngwa Wildlands HQ, nke ị nwere ike iji mgbe ị na-egwu egwu ma ọ bụ nèzí, na-abawanye ahụmịhe egwuregwu gị okpukpu abụọ. Na Ghost Satellite View, ị nwere ike na-ekiri ebe ị na-aga ozugbo. Site na netwọkụ Ghost Recon, ị nwere ike nweta ozi niile gbasara egwuregwu ahụ. Ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche bụ na ị nwere ike ịtọ ebe a na-akparịta ụka ebe ị nwere ike ịhazi ihe ndị enyi gị ga-eme na egwuregwu ahụ.
Budata Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
Tom Clancys Ghost Recon Breakpoint bụ onye na-agba ụta nịntanetị nke Ubisoft. Negwuregwu ndị na-agba ụta nke ndị agha, nke enwere ike igwu na PC, PlayStation, Xbox yana Googles...
Budata Ghost Recon: Wildlands
Ghost Recon: Enwere ike ịkọwa Wildlands dị ka egwuregwu mmemme mepere emepe nke na-eku ume ndụ ọhụrụ nime usoro Ghost Recon ama...
Budata Ghost Recon Online
Tom Clancy Ghost Recon Online bụ egwuregwu ịgba ụta mmadụ atọ nke atọ na-aga nke ọma nke Ubisoft Singapore mepụtara ma nwee njirimara kachasị mma nke Ghost Recon. Na Ghost Recon...
Nikpeazụ, ka anyị ghara ichefu na ị nwere ike ịnweta akụkọ na ozi nke cartels na ihe odide ndị ọzọ ị na-alụ na egwuregwu Ghost Recon: Wildlands HQ. Ọ bụrụ na ị na-egwu Ghost Recon: Wildlands ma chọọ isonye na egwuregwu ahụ site na mpụga yana ngwa ibe ya, ị nwere ike budata ngwa Ghost Recon: Wildlands HQ nefu. Ana m akwado onye ọ bụla zụrụ egwuregwu ka ọ nwalee ya.
Ghost Recon: Wildlands HQ Ụdịdị
Mmepụta: UbiSoft Entertainment